Kooxda Al-Shabaab oo weerar ku qaadday Baladweyne | KEYDMEDIA ONLINE
BALADWEYNE, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan, ayaa sheegaya in dagaalyahanno ka tirsan Kooxda Al-Shabaab ay xalay weerar madaafiic ku billowday ku qaadeen saldhigga Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo Kuwa AMISOM ay ku leeyahiin Xaafadda Howl-wadaag.
Sida ay Keydmedia Online, u sheegeen dadka degaanka, dagaalka ayaa intiisa badan saameeyay dad shacab ah, waxaana la xaqiijiyey geerida Saddax caruur ah oo wada-dhalatay iyo dhaawaca labo kale, kadib markii madaafiic xooggan ku habsadeen gurigooda, xilli uu qoysku ku jiray hurdada saqda dhexe.
Duullaanka ay Kooxda Al-Shabaab, xalay ku qaadeen Baladweyne, ayaa ku soo aadaya xilli, Taliska Qeybta 27aad ee Ciidamada Dhulka XDS, ay shalay howl-gallo ciidan ka sameeyeen deggaanno dhaca bariga iyo koofurta gobolka Hiraan.
Magaalada wabigu kala baro ee Baladweyne, ayaa ka mid ah degmooyinka loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada kuraasta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 11-aad ee JFS, waxayna dadka qaar rumeysan yihiin duullaanka lagu qalqal galinayo amniga magaalada si doorashada looga wareejiyo.
Kooxda Farmaajo hoggaamiyo ayaa dooneysa in kuraasta taalla Baladweyne, doorashadooda loo soo wareejiyo Muqdisho, si loo boobo, maadaama ay khatar u arkaan in Fahad iyo rag kale, socdaal ku tagaan Hiiraan, taasoo suuragalin karta abaabulka arbushaad amni.
Madaxweynaha Hirshebaeelle, Cali Guudlaawe, ayaan tagin Baladweyne tan iyo markii loo boobay kursiga ugu sarreeya Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, wuxuuna hadda ku sugan yahay Caasimadda halkaasoo uu ka wado kulamo wada-tashi.